रिमोट कंट्रोल विमान - iSearch
सुरु बच्चा र बच्चा खिलौने टाढाको नियन्त्रित विमान
दूर-नियन्त्रित विमान किशोरों र वयस्कों को बीच महान लोकप्रियता को आनंद लें। तिनीहरू कहिलेकाहीँ धेरै जटिल हुन्छन् र केवल एक खिलौने भन्दा बढी छन्। साना मोडेलहरू विशेष गरी इनडोर उडानको लागि डिजाइन गरिएका छन्, जबकि अधिकांश मोडेल विमान आउटडोर प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको छ।
1 रिमोट-नियन्त्रण गरिएको विमान के हो?
2 रिमोट-नियन्त्रण गरिएको विमानको अपरेसन
3 व्यक्तिगत घटकहरू
3.1 रेडियो रिमोट कंट्रोल
3.2 आवृत्ति र आवृत्ति दायराहरू
3.5 सर्ममोटर्स (सर्भर)
3.6 गति नियन्त्रक वा गति नियन्त्रक
3.7 ब्याट्री प्रविधि (संचालक)
5 विभिन्न संस्करणहरू
5.1 मोडेल प्रकार
6 FPV निष्क्रिय र सक्रिय
7 पहिलो उडान तयारी गर्दै
8 रिमोट-नियन्त्रण विमानको फाइदाहरू
10 हवाइजहाज छान्नुहोस्
12 इन्टरनेट वा रिटेलरमा खरिद गर्नुहोस्?
12.1 इन्टरनेटमा खरिद गर्दै
12.2 विशेषता पसलमा खरीद
रिमोट-नियन्त्रण गरिएको विमान के हो?
मा रिमोट-नियन्त्रण विमान यो बारेमा छ मोडेल हवाईजहाज, जुन वास्तविक फ्लाइट विशेषताहरू छन्। रेडियो रिमोट कंट्रोलहरू मोडेलको रडारहरू र इन्जिन (ग्लाइडर को बाहेक) उडानमा नियन्त्रण गर्दछ, त्यसपछि त्यसपछि टेकऑफ र चढ्ने, घुमाउरो, घाँटी र ल्यान्डिंग सुरु गर्नुहोस्। त्यहाँ धेरै आजीवन छन् वास्तविक भूमिका मोडेलहरु को प्रतिकृतिहरुजुन सबै मोडेलहरूसँग होइन। तपाईं सरल खेल विमान भेट्टाउनुहुनेछ, जसमा एक वा धेरै प्रोसेलहरू (धेरै धेरै इन्जिनहरूसँग सम्बन्धित) छन्। धेरै लोकप्रियका प्रतिकृतिहरू हुन् लडाकु जेटयो संग प्रोपेलर वा प्रोभेलर सुसज्जित छ। इम्पेलर्सहरू एक आवास प्रोपेलरमा संलग्न हुन्छन्, जसले मोडेलमा आन्तरिक स्थापनालाई अनुमति दिन्छ र विशेष गरी लागि जेट मोडेल प्रयोग गरिनु धेरै निर्माताहरू मा सैन्य र नागरिक विमानन को प्रतिकृतिहरू व्यापक रूपमा उपलब्ध छन्। एक विशेष प्रकार राख्नुहोस् रिमोट-नियन्त्रण ग्लाइडरहरू जो अतिरिक्त एक सहायक इन्जिन संग प्रदान गरिएको छ (मोटर sailer, मोटर ग्लाइडर)।
रिमोट-नियन्त्रण गरिएको विमानको अपरेसन
एक रिमोट-नियन्त्रण विमान एक छ वास्तविक विमान, यो सामान्यतया मोटर को आवश्यक गति सम्म पुग्न आवश्यक छ। यदि पंखहरूमा प्रवाह गति पर्याप्त छ, यो उड्न सुरु हुन्छ।
वास्तविक हवाई जहाजहरूको रूपमा, यो स्टीयरिंग रडडर चाहिन्छ। मोडेलमा निर्भर छ, त्यहाँ नियमनयोग्य चक्कर, एनिलेरन्स र लिफ्टहरू छन्:
चकलेट को एक विकृति को बायाँ या बारी को कारण बनताछ
एलेवेटरको अप्ठ्यारोले गर्दा विमानको उचाल वा गिरावट (ढलान वा दीर्घकालीन अक्षको कमी)।
एलरलरहरूले लेटरेटिनल अक्ष वा टिल्टिंगको बारेमा रोटेशनलाई अनुमति दिन्छ।
रिमोट कंट्रोलको बारेमा उपयुक्त हुन सक्छ रेडियो मार्फत आदेशहरू त्यसकारण तिनीहरू मोडेलमा पठाइरहन्छन् आर सी हवाईजहाज भनिन्छ। RC को लागि खडा छ रेडियो नियन्त्रण र रेडियो आदेशहरू मार्फत नियन्त्रण वा नियन्त्रण नाम। एक प्रापकले संकेतहरू प्राप्त गर्दछ र त्यसपछि सर्वोमोटोरहरू चलाउँदछ, जसले आदेश अनुसार कार्यान्वयन गर्दछ र रुडरहरू समायोजन गर्छ। मा मोटर मोडेल रिमोट कंट्रोल र इन्जिन स्पीड द्वारा नियन्त्रित छ। इन्जिनको रूपमा खडा हुनुहोस् इलेक्ट्रिक र दहन इन्जिन उपलब्ध। बिजुली मोटर्स र सम्बन्धित ब्याट्री प्रविधिमा निरन्तर प्रगतिको कारणले, इलेक्ट्रिक मोटर्सहरूले ठूलो मात्रामा प्रदर्शन प्रदर्शन आवश्यक छ, व्यावसायिक मोड खेलमा दहन इन्जिनहरू ठूलो मात्रामा बिस्थापित गरेको छ।
उडान उडानको अलावा, केही घटक पूर्ण तयार-देखि-उडान मोडेलको भाग हो।
रेडियो रिमोट कंट्रोलले प्रयोगकर्तालाई मोडेलमा "आदेशहरू" पठाउन अनुमति दिन्छ। त्यहाँ दुई जौस्टिकहरू उपलब्ध छन्, जुन तेर्सो र ठाडो सारियो। यसले नियन्त्रणकर्ताको लागि नियन्त्रण आदेशलाई अनुमति दिन्छ र मोटर नियन्त्रणलाई संवेदनशील रूपमा बन्द गरिएको छ। मोडेल र प्रकार्यको आधारमा, अन्य नियन्त्रण तत्त्वहरू पनि हुन सक्छ, उदाहरणका लागि पुन: योग्य ल्यान्डिङ गियरको लागि स्विच। प्रत्येक प्रकार्यको लागि मूल रूपमा एक च्यानल आवश्यक छ। यसैले, ट्रांसमिटरहरूसँग धेरै च्यानलहरू हुन्छन्, कम से कम एक3च्यानल नियन्त्रणमा मोटर मोलको लागि पहिल्यै सिफारिस गरिएको छ। निस्सन्देह, अधिक च्यानलहरूको नियन्त्रणले विभिन्न कार्यहरू वा पङ्क्ति नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। यसले एकलाई अनुमति दिन्छ रिमोट-नियन्त्रण विमान शुरुवात शुरुवात को विमान मा मास्टर गर्न को लागि यो धेरै अधिक मुश्किल हुनेछ। एक स्टाल सामान्यतया मोडेलको दुर्घटनामा नतीजा, जस्तै वास्तविक विमानको मामलामा, खासकर यदि यो कम निचोटिमा हुन्छ।
आवृत्ति र आवृत्ति दायराहरू
यसका लागी आर सी मोडेल खेल विभिन्न आवृत्ति दायराहरू उपलब्ध छन्। केही समयको लागि, फ्रिक्वेन्सी बैंड 27 मेगाहर्ट्ज, 35 मेगाहर्ट्ज र 40 मेगाहर्ट्जमा केही च्यानलहरू जर्मनीमा अनुमोदन गरिएको छ। यो ध्यान दिनुहोस् कि 35 मेगाहर्ट्ज दायरा मात्र मोडेल विमानको लागि अनुमोदन गरिएको छ। यसले सुरक्षा बढाउँछ किनभने अन्य प्रयोगकर्ताहरू आर सी मोडेल, उदाहरणका लागि रिमोट-नियन्त्रण कार वा जहाजहरू, मोडेल विमान को आवृत्तिहरु परेशान हुन सक्दैन। यति लामो समयसम्म 2,4 GHz दायरा हो आर सी मोडेल स्वीकार गरियो। एकै समयमा, यस क्षेत्रमा प्रसारण र स्वागत प्रविधिको सुधार भएको छ। ट्रांसमीटर मा निर्भर गर्दछ, एक नि: शुल्क अनोखी च्यानल अब स्वतः खोज को छ। ट्रांसमीटर र रिसीभर एक-अर्कालाई पनि ट्यून गरिएको छ ताकि अर्को रिमोट कंट्रोलले अब मोडेल नियन्त्रण गर्न सक्दैन।
निस्सन्देह, रिसीभरले फ्रिक्वेन्सीसँग मेल खान पर्छ आवृत्ति दायरा र प्रसारण च्यानलको सर्तमा प्रयोग गरिएको। तिनको पावर आपूर्ति चाहिन्छ, जुन सामान्यतया मोडेल ब्याट्रीद्वारा प्रदान गरिन्छ। यसले संकेतहरू ट्राईटरबाट प्राप्त गर्दछ र जडान गरिएको सर्भर नियन्त्रण गर्दछ वा नियन्त्रकहरू को अनुसार मोटर नियन्त्रणका लागि नियन्त्रण गर्दछ। एकै समयमा, यसले जोडिएको सर्भर वा नियन्त्रकहरू लाई शक्ति प्रदान गर्दछ।
Für रिमोट-नियन्त्रण विमान इलेक्ट्रिक र दहन इन्जिनहरू उपलब्ध छन्। तथापि, प्रायः "शौकिया पाइलटहरू" लाई विद्युतीय मोटर मन पर्छ। यो हुनेछ कुनै पेट्रोल मिश्रण छैन आवश्यक छ, श्वसन प्रदूषण धेरै कम छ र त्यहाँ कुनै निकास नलीहरू छैनन्। दहन इन्जिनहरू केवल पेशेवरहरू द्वारा मात्र प्रयोग गरिन्छ, जुन लैजानको लागि, उदाहरणका लागि, धेरै ठूला र यसैले भारी मोडहरू। आधुनिक इलेक्ट्रोनिक मोटर्सको प्रदर्शन (उदाहरणका लागि ब्रशलेस मोटरहरू) धेरै प्रयोगकर्ताहरूका लागि पर्याप्त छ। आन्तरिक दहन इन्जिनहरूसँग वेभसाइट पनि छन् जुन उनीहरूलाई पहिल्यै आवश्यक छ र हटाइनु पर्छ। यसको विरुद्ध एक मोटर मोटर काम गर्दछ बटन जुनसुकै आवश्यक वर्तमान (चार्ज गरिएको ब्याट्री) उपलब्ध छ।
लगभग सबै मा आर सी मोडेल आलोचनाहरू गरिनु पर्छ। यसलाई स्टीयरिंग समायोजन गर्न बन्नुहोस् आर सी कार, मा एक पछाडि समायोजन आर सी नाउ या एक मा चक्कर को संचालन रिमोट-नियन्त्रण विमान, यो काम सानो बिजुली सर्भरमोटर्स, सर्भर द्वारा गरिन्छ। तिनीहरू विभिन्न आकारहरूमा र विभिन्न समायोजनका साथ उपलब्ध छन्। एक इन्टरनेट दहन इन्जिनलाई थ्रोटललेर्फत पावर नियन्त्रण गर्न सर्वो चाहिन्छ।
गति नियन्त्रक वा गति नियन्त्रक
इलेक्ट्रिक मोटर्स दहन इन्जिन जस्तै सर्वो मार्फत नियन्त्रण गरिँदैन। तपाईंलाई एक नियामक चाहिन्छ जुन विद्युत मोटरको भोल्टेज नियन्त्रण गर्दछ। यी नियामकहरू, गति नियन्त्रकहरूलाई पनि भनिन्छ, फरक भोल्युमहरूका लागि उपलब्ध छन्। मा आर सी कार र केही आर सी डुङ्गा तिनीहरू पनि उल्टाउने अनुमति दिन्छ, के रिमोट-नियन्त्रण विमान निस्सन्देह, अति उत्तम।
ब्याट्री प्रविधि (संचालक)
बैटरियां हो ऊर्जा भण्डारण, तिनीहरु बारम्बार रिचार्जेबल हुन्छन् र आवश्यक ऊर्जा प्रदान गर्छन् आर सी मोडेल उपलब्ध। अक्सर तिनीहरू पनि मा छन् रेडियो रिमोट नियन्त्रण, धेरै कक्षहरू परस्पर गरेर, इच्छित तनाव उदाहरण6दिन एक्स 1,2 भोल्ट कक्षहरू, 7,2 वी संग एक ब्याट्री प्याक भोल्टेज प्रदान गर्दा भोल्ट मा ब्याट्री, समाई लागि, हासिल छ
mAh मा। लागि आर सी मोडेल उदाहरणका लागि, निकेल-धातु हाइड्राइड (NiMH) ब्याटरहरू प्रायः प्रयोग गरिन्छ जुन उदाहरणका लागि कम आत्म-निर्वहन हुन्छ, उदाहरणका लागि क्राफ्टमैक्स रेसिङ प्याक, आवश्यक जडानकर्ताको अतिरिक्तमा रिमोट-नियन्त्रण विमान ब्याट्रीको आयाममा र निश्चित रूपमा ध्यान दिनुहोस।
तामीया प्लगको साथ क्राफ्टम्याक्स ब्याट्री रेसि Pack प्याक - 7,2V / 5000mAh / NiMH ब्याट्री / उच्च प्रदर्शन आरसी ब्याट्री पैक 5000 mahDisplay
आपूर्ति को स्कोप: Tamiya कनेक्टर संग 1x Kraftmax ब्याट्री प्याक दौड - 7,2V / 5000mAh
ब्याटरहरू प्रयोग पछि पुन: चार्ज गर्नु पर्छ। यसलाई चार्जर चाहिन्छ। पेशेवरहरूले विशेष चार्जरहरू प्रयोग गर्छन्, जसले हेरविचार, क्षमताको माप र कहिलेकाँही पुरानो ब्याट्रीहरूको पुनरुत्थान पनि अनुमति दिन्छ।
रिमोट-नियन्त्रण हवाईजहाज व्यक्तिगत वा सेट उपलब्ध छन्, सँगसँगै धेरै वा (आधारमा संस्करण मा) मा आवश्यक घटक को लागि:
RTF मोडेलहरू व्यावहारिक रूपमा सुरू गर्न तयार छन्। RTF को अर्थ "फ्लाईको लागि तैयार" र यसैले रिमोट कंट्रोल, रिसीभर र सबै चीज पहिले नै यो सेटमा समावेश गरिएको छ। कुनै पनि भेला वा चिन्ता गर्न को लागी छैन।
PNP "प्लग र प्ले" को लागि खडा छ। यहाँ अझै पनि केही भागहरूमा हात राख्नु पर्छ, जुन अहिलेसम्म माउन्ट गरिएको छैन। अक्सर, रिमोट कंट्रोल, रिसीभर वा ब्याटरहरू अझै पनि यस संस्करणमा खरिद गर्नुपर्छ।
ARF अर्थ "लगभग उडान गर्न तयार"। तिनीहरू लगभग समाप्त छन्, प्रकाश विधान कार्य वा बैटरी को लागी चार्जर को बाहेक।
BNF (बाइन्ड र उडान) उडान भन्दा पहिले रिमोट रिमोट नियन्त्रणमा बाँध हुनुपर्छ।
RTB को मतलब "बाँध गर्न तयार" र नामित रिमोट-नियन्त्रण विमान, जो अझै पनि एक रिसीभर र ट्रांसमीटर को आवश्यकता हो।
व्यावहारिक रूप देखि, त्यहाँ एक प्रकार को रूप मा सबै प्रकार को विमानहरु छन्, जो पनि वास्तविक मा मौजूद छ। साथै, त्यहाँ धेरै मोडेलहरू छन् जुन कुनै पनि मोडेल मोडेलहरूमा आधारित छैनन्। बिग मोडेलहरू, जुन निर्मित र अनुभवी पेशेवरहरूद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ, साना मोडलहरू beginners को लागि थप रोचक छन्। यहाँ छन् डबल-तल्ले, Motorplanes र जेटहरू मनपर्नेहरू। यीमध्ये धेरै रिमोट-नियन्त्रण विमान स्ट्रोरोफोम (मोल्ड फोम) बाट बनाइन्छ, जुन विशेष गरी बालबालिकाको लागि फाइदा हुन्छ। तिनीहरूले महत्त्वपूर्ण रूपमा चोटको जोखिम घटाउँछन् र क्रयासहरूमा लगभग कुनै पनि क्षति गर्दैनन्:
Slowflyer पहिले नै ढिलो गतिमा उड्छ। तिनीहरू मास्टर गर्न सजिलो छन् र6वर्ष भन्दा बढी बच्चाहरुका लागि उपयुक्त छन्। यस्तो एक रिमोट-नियन्त्रण विमान ठूलो कोठा वा हल्लहरूमा पनि उडाउन सकिन्छ। प्रयोग बाहिर जाने सम्भावना छ, तर यो लगभग पवन रहित हुनुपर्छ।
सैन्य विमान धेरै लोकप्रिय छन्। यहाँ, प्रशंसक समुदाय वर्तमानमा साझेदारी गर्दछ लडाकु जेट र बमवर्षक वा2बाट पुरानो विमान। विश्व युद्ध उदाहरणका लागि, F-117 नर्थवाक। जेटका लागि प्रोपेलरको छेउमा छ, जुन यहाँ छ, तथापि, सामान्यतया पछि लाग्ने प्रोपेलरको रूपमा माउन्ट गरिएको छ। यो इन्जिनको साथ एक जैकेट प्रोपेलर हो। आवासको कारण, यो वास्तविक विमानहरूको विमान इन्जिन जस्तै धेरै देखिन्छ। वास्तविक जेट इन्जिन वास्तव मा उनको मोडेल को उपयोग को लागि पेशेवरों द्वारा उपयोग गरिन्छ। यद्यपि तिनीहरूको प्रयोग केवल धेरै परिस्थितिहरूमा सम्भव छ।
मोडेलहरू स्केल गर्नुहोस् वास्तविक भूमिका मोडेलको विस्तृत प्रतिलिपिहरू छन्। यहाँ थियो विश्वसनीयता फोकसमा। यी रिमोट-नियन्त्रण गरिएका विमानहरू प्राय: प्राय: उडानका विशेषताहरू छन्
शक-फ्लायर तिनीहरूको कम वजनको विशेषता हो। तिनीहरूका लागि उपयुक्त छन् एरोब्याटिक्स (3-D उडान मोडेल) र स्टेलमा राम्रो तरिकाले इन्टरनेट गर्न सकिन्छ।
Lxhm Rc एयरक्राफ्ट F-117 नाइटहक स्टिल्ट क्याप ब्रशलेस 2,4 GHZ 100km / h एविएटर आरटीएफए डिस्प्ले
सबै भागहरु धेरै विस्तृत चित्रित छ र विमान वास्तव मा शानदार लग रहेको छ
F-117 ले तपाईलाई कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ जुन कुनै पनि एक्क्र्याटिक पनीरको बारेमा मात्र प्रदर्शन गर्न सक्छ।
यसको स्थायित्वको कारण, यो सबैको लागि सही छनौट हो जुन जुन महसुस गर्न चाहन्छ।
विमान एक विशेष ईपीओ फोम बाट बनाइएको छ जुन धेरै उज्यालो छ तर धेरै स्थिर छ ....
FPV निष्क्रिय र सक्रिय
FPV को लागि खडा छ "पहिलो व्यक्ति दृश्य" र एक संग मदत गर्नेछ क्यामेरा प्रदर्शन। एक निष्क्रिय प्रणालीमा, क्यामेरा चलचित्रहरू उडान। परिणामस्वरूप भिडियो सामग्री पछि पछि हेर्न सकिन्छ र उडानबाट व्यावहारिक रूपमा देखाउँछ "म परिप्रेक्ष्य"जस्तो कि प्रयोगकर्ता आफै मोडेलमा बसिरहेको थियो। सक्रिय एफपीवी संग वास्तविक समयमा भिडियो छविहरू प्राप्तकर्तालाई पठाइयो। यसले प्रयोगकर्तालाई भिडियो तस्बिरहरूमा आधारित मोडेल नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। छवि विश्लेषणको लागि साना मनिटरहरू वा भिडियो चश्मा प्रयोग। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि दुई ट्रांसमिटरहरूले सक्रिय एफपीवी, रेडियो रिमोट कंट्रोल र भिडियो छवि ट्राफिकमा काम गर्दछ। पारस्परिक हस्तक्षेप फरक आवृत्ति दायराहरूबाट बच्नको लागि उदाहरणको लागि, 2,4 र 5,8 GHz को रूपमा रोज्नुपर्छ।
पहिलो उडान तयारी गर्दै
एक रिमोट-नियन्त्रण विमान यसको पहिलो प्रयोग भन्दा राम्रो तरिकाले जाँच गर्नु पर्छ। विफलता वा मालफनशनले मोडेललाई हावामा क्र्यास गर्न सक्छ। उडानको लागि एक उपयुक्त ठाउँ अवस्थित हुनुपर्छ। विदेशी भूमिको लागि स्वामीको स्पष्ट अनुमति चाहिन्छ! सन्दर्भीय क्षेत्रीय नियम आर सी हवाईजहाज विचार गरौं। मोटरमा वा वायुसेवाको नजिकै नो-फाउको क्षेत्र हुन सक्छ। मोडेलमा बैटरियों, रिमोट कंट्रोल र सम्भवतः प्राप्तकर्ताको लागि पुरा तरिकाले चार्ज गरिनेछ। प्रोपेलरलाई दृढताका लागि जाँच गरिनु पर्छ। प्रयोग गरिएको रेडियो आवृत्ति मुसीबत मुक्त हुनुपर्छ। ब्याट्रिलाई दृढतापूर्वक स्थापित गरिनु पर्छ र अनियन्त्रित पनीरमा पर्ची छैन। मानिसहरू र जनावरहरू उडान मोडेलबाट टाढा बस्नुपर्छ। विशेष गरी चराहरूले प्रेतवाचक रूपमा क्रूसमा पार गर्न सक्छन्। तर कुत्ते पनि लिन वा भूमि लिन सक्दछन् मोडेल विमानहरु खतरनाक रूपमा आउनुहोस्। पानीको सतहहरूमा उडानहरू क्र्यासको घटनामा खतराको जोखिम बढाउँदछ। विमान (कार्यकर्ता प्रतिमा र इन्जिन नियन्त्रण) को कार्यहरू अझै पनि खडा मोडेलमा परीक्षण हुनुपर्छ।
रिमोट-नियन्त्रण विमानको फाइदाहरू
फोकस धेरै मज्जाको सबै मोडेलमा छ। यसले बुबालाई ठूलो आनन्द दिन्छ जब उनीहरूको आफ्ना सन्तानहरूसँग एक छ उड्ने सुरु, उडान र भूमि। यसरी, एक छ रिमोट-नियन्त्रण विमान जवान र बूढो एक धेरै लोकप्रिय शौक को लागि। प्रक्रियामा, जवान पीढ़ीले बचाउने बाट प्रविधिको बारेमा बुझ्न सक्षम हुनेछ, जुन ठूलो सिक्ने कारक संग सम्बन्धित छ। त्यसै गरी, यो राम्रो मोटर कौशलको लागि अनुकूल छ, ए रिमोट-नियन्त्रण विमान सेवा गर्न सिक्न। यो शौकमा, मित्रहरू मनपर्ने व्यक्तिहरूसँग सजिलो गर्न सजिलो छ, किनभने विभिन्न aviators को लागि यो उत्साह जोडन्छ।
साना बच्चाहरुका लागी, सानो फोम मोडेलहरू उपयुक्त छन् किनभने तिनीहरू जटिल नियन्त्रणमा टाढा छन्। आन्तरिक दहन इन्जिनहरूको साथमा उपयुक्त उपयुक्त छैन। तपाईंको बच्चालाई उड्ने अभ्यासको दौडान निगरानी गर्नुहोस्!
विभिन्न मोडेलहरूको छनौट ठूलो छ र प्रायजसो खरिदका लागि छनौट गर्दछ। त्यसैले, खरिद गर्नु अघि निश्चित मापदण्डलाई विचार गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ:
यो सँधै सिफारिस गरिन्छ, यदि तपाइँ राम्रो गुणको लागि निर्णय गर्नुहुन्छ। रोबबी, एलआरपी, जाम्बारा र ग्रिप्नेरर जस्ता निर्माताहरूले उच्च गुणस्तरको स्तरको कारणले उद्योगमा राम्रो नाउँ कमाएको छ।
टाढाको नियन्त्रित विमान हुन सक्ने कति ठूलो बारेमा सोच्नुहोस्। पंखहरूमा ध्यान दिनुहोस्। यो तपाईंको वाहनमा निश्चित गर्न सजिलो हुन्छ।
यो घरभित्र उडाउन सकिन्छ, वा के तपाईं खुला आकाश को लागि केहि ठूलो खोज्दै हुनुहुन्छ?
स्पष्ट छ कि तपाई जहाँ चयन गरिएको मोडेल मोडेल वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। आंशिक यो आवश्यक छ एक मोडेल हवाई जहाज क्लब मा।
बैटरी को शुल्क र उडान समय जांचें। लामो उडान मजा स्पेयर ब्याटरको लागि योजना बराबरको साथ।
रिमोट-नियन्त्रण गरिएको विमानबाट अपरिचित पायलटको रूपमा, तपाईंले एक शुरुवातको मोडेललाई अझ राम्रो पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। यी तीव्र उडान नगर्ने र आकारमा सानो पनि छन्।
इन्टरनेट वा रिटेलरमा खरिद गर्नुहोस्?
सबै जानकारी पछि, तपाईं आफैलाई सोध्नु भएको छ कि तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ रिमोट-नियन्त्रण विमान in उच्च गुणवत्ता र एक उचित मूल्य खरीद गर्न सक्छ। हामी तपाईंलाई दुई सम्भावना प्रस्तुत गर्दछौं, आफैलाई निर्णय गर्नुहोस्! इन्टरनेट वा मोडेल पसलहरूमा खरिदको बीचमा विभाजन गर्नुहोस्।
धेरै अनलाइन रिटेलरहरूको लागि धन्यवाद, इन्टरनेटमा एक विशाल छनौट उपलब्ध छ। इन्टरनेटमा ठूलो वर्गीकरणले तपाईंको इच्छित मोडेल खरीद गर्न सजिलो बनाउँछ। तपाईं पसलहरूमा आफ्नो हृदयको सामग्रीमा पसल गर्न सक्नुहुन्छ घडीको वरिपरि ब्राउज गर्नुहोस् एक सप्ताहमा7दिन, लाभ पनि हटाइएको डीलरमा यात्रा लागत र यात्रा समय हो। उनीहरू पनि खडा गर्छन् रोचक सेट उपलब्ध, जुन धेरै आकर्षक मूल्य हुन सक्छ। सामान्यतया, एक वा अन्य बर्गहरू अनलाइन रिटेलरमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। यहाँ तपाईले निश्चित रुपमा तपाईको चाहानुहुन्छ रिमोट-नियन्त्रण विमान पहिले। तपाईंले छिटो डेलिभर टाइम र हटाउने अधिकारको बिना गर्नु पर्दैन। दुर्भाग्यवश, तपाईं तुरुन्त स्थानीय वाहक संग आफ्नो वांछित मोडेल लिन सक्नुहुन्न।
विशेषता पसलमा खरीद
लाभ खरीद गर्दा लाभ हटाउनुहोस् रिमोट-नियन्त्रण विमान मोडेल पसलमा तपाईले तुरुन्तै मोडेलको साथ तपाईंको घर लिन सक्नुहुन्छ। आदर्श रूप मा, तपाईं एक निजी परामर्श को लागि सक्षम स्टाफ पनि पाएंगे। दुर्भाग्यवश, यो पसलहरू दुर्लभ भएका छन्, प्रायजसो चयन चयन गर्न चाहानुहुन्छ। तपाई प्रायजसो भाग्य चाहिन्छ भने, यदि तपाईं वर्गीकरणमा आफ्नो इच्छित मोडेल फेला पार्न चाहानुहुन्छ। पसल आंशिक लामो यात्रामा खरिद भएको जडित। एक परामर्शको लागि पर्खाइ पहिले नै केहि खरीददारहरूलाई निराश पारेको छ। अनलाइन रिटेलरको विपरीत, साँचो सौदा मूल्यहरू दुर्लभ छन्। फर्काउने समस्याहरू हुन सक्छ।
अर्को लेखआईफोन एक्स